Ray o, nohavaozin’izao fanomezanao mahagaga izao izahay, ka enga anie ho tahaka ny hiomananany hankalaza ny nahaterahan’ny Zanakao mendrika hotsaohina no hahhafaly anay hahazo ny soa mandrakizay avy aminy. Ambaran’ny vavaka aorian’ny Komonio fa miankina amin’ny fiomanana ny halalin’ny hafaliana. I Joany Batista no tonga hanomana ny fiavian’ny Mesia, izy no ilay Elia ho avy, hanambara amin’ny olona ny tena famonjena dia ny famelana ny hadisoana.
Tsy isika no hanamboatra trano honenan’Andriamanitra fa izy no efa nanomana lanitra hivondronantsika mba hidera ny voninahiny. Tsy ny fahamendrehantsika fa ny famindram-pony. Izay no mahatonga an’i Md Paoly hilaza fa ao amin’ny toerana mampiavosa ny fahotana mahasafononoka ny fahasoavana. Lehibe noho ny fahotantsika manko ny famindram-pon’Andriamanitra.
Nanangana tandrom-pamonjena ho antsika izy. Inona moa izany tandrom-pamonjena izany? Fandikana ara-bakiteny ny fomba fiteny hebrio, hilazana fa ny tandroka dia manambara hery tsy hay tohaina. Famonjena mahefa, tsy azon’iza na iza toherina izany no hevitry ny hoe tandrom-pamonjena. Tsy hisy hahatohitra ny herin’Andriamanitra vonona mandrakariva hanavotra ny vahoakany.
Ny mahavery saina indraindray dia satria afagarontsika ny famionjen’Andriamanitra sy ny fanirian’olombelona. Ny zanany maty teo am-bony hazofijaliana dia heverin’ny olona ho fahaverezana, saingy ny fitsanganan-ko velona no tao amin’ny fandaharan’Andriamanitra.
Tsy ho fanenjehana aloka na fitantarana aloka intsony anie ny fiainantsika fa hohazavain’ilay Masoandro, ka ho taratsy ny famirapiratany, ho voninahitr’Andriamanitra sy ho fiadanan’ny olombelona tsara sitrapo.